Fanavaozana ny asam-panjakana :: Hofehezin’ny fepetra manokana ny fandraisana mpiasa vaovao • AoRaha
Hiharan’ny fanavaozana ny masontsivana amin’ny fandraisana mpiasam-panjakana vaovao hataon’ny fitondrana, araka ny toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra teny Iavoloha, afak’omaly. Nambarany fa « fifanarahana arak’asa manokana » no hampiasaina amin’ny fandraisana an’ireo mpiasa ireo amina sehatra telo, dia ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny fitandroana ny filaminana. « Tsy mitovy amin’ny fifanarahana teo aloha ny fandraisana mpiasampanjakana fa toy ireny fifanarahan’ny mpiasa amin’ireny orinasa tsy miankina ireny », hoy ny fanazavan’ny minisitry ny Asa , Marie Gisèle Ranampy tamin’ny antso an-tariby, omaly.
Hitakiana tamberin’ andraikitra ireo mpiasampanjakana vaovao vonona ny hiara-hiasa amin’ny Fanjakana. « Voafaritra ao amin’ io fifanarahana io ny vokatra andrasana aminy, ny tamberin’andraikitra iantsorohany, ny toerana iasany, ny fe-potoana hiasany, ary koa ny sazy hihatra aminy raha tsy manatanteraka ny fifanarahana araka izay voasoratra », hoy ny fampitam-baovao avy amin’ny fiadi-diana ny Repoblika. Hahazo tombony manokana ireo mpiasa vonona ny hampianatra sy hitsabo marary ary hitandro ny filaminana any amin’ireo faritra ambanivohitra.
Hisy araka izany ny fanovana ny lalàna mifehy ny fandraisana mpiasampanjakana mihatra ankehitriny mba hifanaraka amin’ny fepetra apetraky ny Fanjakana. Vaomiera avy amina minisitera maromaro no hamolavola ny tolo-dalàna momba izany, avy eo hatolotra hodinihina ary miandry ny fankatoavan’ny Antenimieram-pirenena.
« Hodinihina mandritra ny fivorian’ny vaomiera avokoa ny pitsopitsony rehetra momba an’io fifanarahana io, ary hatramin’ny karama mihitsy. Hisy ny antso tolotr’asa atao sy ny fifanatrehana amin’ireo olona liana », hoy ihany ny fanazavan’ny minisitra Marie Gisèle Ranampy.
Tanjona ny fanatsarana ny fiahiana ny fiainan’ny vahoaka any amin’ny faritra rehetra. « Hahazo tombony manokana amin’ny tolotr’ asa ireo olona manana ny mari-pahaizana mifanaraka amin’ny fepetra takina. Eo ihany koa ny famoronana asa any amin’ny faritra niavian’izy ireo tsirairay avy », araka ny fanamarihana tamin’ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra.
Nandritra ny fitsidihany tany amin’ny faritra Atsimon’ ny Nosy, tamin’ny volana janoary teo, no efa nanambaran’ny Filoham-pirenena ny fametrahana fotodrafitrasa handraisana an’ireo mpi-tsabo sy mpampianatra ary mpitandro ny filaminana vonona ny hiasa any amin’ireo faritra lavitry ny tanàn-dehibe. Nohamafisin’ny minisitry ny Asa « ny ezaka ataon’ny Fanjakana hametrahana an’ireo fotodrafitrasa handraisana an’ireo mpiasa vaovao ». Nosinganiny ny trano hitoeran’ireo mpiasam-panjakana vaovao ireo.
Tsy namboraka ny isan’ireo mpiasa horaisin’ny Fanjakana amin’ireo sehatra telo ireo kosa ny minisitra Marie Gisèle Ranampy. « Maro ireo mpiasa horaisina. Samy mbola hamaritra ny isan’ny mpiasa ilainy ireo minisitera voakasika, hoy hatrany izy, ka ho hita eo ny isa raikitra ».
Antenimierandoholona :: Mihemotra ny fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny toaka gasy